Muuri News Network » DEG DEG: Dagaal Kooban oo Goordhaw ka dhacay Deegaanka Gandaawe & warar shegaya..
DEG DEG: Dagaal Kooban oo Goordhaw ka dhacay Deegaanka Gandaawe & warar shegaya..
Jul 3, 2016 - Comments off
Wararka naga soo gaaraya deegaanka Gandaawi ee duleedka Degmada Marka ayaa sheegaya in halkaas ay weerar fulaynima ah kusoo qaadeen ciidamada mooryaanta militariga soomaaliya.
Halka weerarka lagu soo qaaday ayaa waxa ay saldhig ciidan u tahay ciidamada deegaanka; ciidamada deegaanka iska caabiyay dibna u riixay ciidamdaas taagta daran ee ku qaraabta magaca mikitariga soomaaliya waxaana goobta kusugan oo si buuxda u maamula ciidamada deegaanka.
Goobjooge ku sugan deegaanka Gandaawi ayaa inoo xaqiijiyay in ciidamada deeganka aanan soo gaarin wax dhibaata ah; balse aan lasheegi karin qasaaraha gaaray ciidamda mooryaanta ee dhibaatada ku haya shacabka deegaanka.
Bilihii ugu danbeeyay ayaanan wax dagaal ah ka dhicin deegaanadaas; waxaana sabab u ah cududda iyo quwada ciidamda deegaanka oo korortay isla markaana ay u babacdhigi karin moryaanta qowleeysatada ah ee dhuumaaleysiga ku jooga deegaanadaas